အလုပျကွိုးစားတိုငျးလညျး မခမျြးသာနိုငျပါဘူး... ရှေးခယျြမှုမှနျကနျလာအောငျ ဘယျလိုတှေ လုပျရမလဲ၊ - Barnyar Barnyar
အလုပျကွိုးစားတိုငျးလညျး မခမျြးသာနိုငျပါဘူး… ရှေးခယျြမှုမှနျကနျလာအောငျ ဘယျလိုတှေ လုပျရမလဲ၊
February 27, 2022 KNOWLEDGE 0
တဈခါက အဘိုးကွီးတဈယောကျဟာ စိတျညဈနတေဲ့ လူငယျတဈယောကျကို တှတေ့ော့ မေးလိုကျပါတယျ။သားငယျလေး မငျးဘာတှေ တှေးပွီး စိတျညဈနတောလဲကှ။ အဘိုးကွီးက ဘေးမှာဝငျထိုငျရငျး မေးလိုကျတယျ။
ကြှနျနျောဗြာ အခုထိ မခမျြးသာနိုငျသေးလို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ စိတျပကျြနတော။ ဘိုးကွီးက မကျြလုံးပွူးသှားကာ “ဟေ မငျးက ခမျြးသာခငျြလို့လား ” လူငယျက ကသိကအောကျဖွဈသှားကာ“ဦးလေးကလဲဗြာ မခမျြးသာခငျြတဲ့သူ ဘယျသူရှိလို့တုနျး လူတိုငျး ခမျြးသာခငျြကွတာပဲဗြ”
အေးပါ ဟုတျပါပီ။ ဒါနဲ့ မငျးခမျြးသာခငျြတော့ အခုဘာတှေ လုပျနတေုနျး။ ကြှနျနျော အခု Company တဈခုမှဝနျထမျးလုပျနတော ၁၀ နှဈကြျောပီ။
အလုပျလဲ ကွိုးစားတာပဲဗြာ၊ ခုထိ မခမျြးသာသေးဘူး အဘိုးကွီးက တဈခကျြပွုံးသှားကာ “မငျးအခု ဘယျသူ့အတှကျ အလုပျလုပျနတောလဲ ” Company မှာ လုပျတာဆိုတော့ Company တိုးတကျဖို့အတှကျပေါ့ဗြ။
မငျးက မငျးအတှကျ လုပျတာမှ မဟုတျတာ မငျး Company အတှကျ လုပျတာပဲဟာ မငျးခမျြးသာမလား Company ပဲ ခမျြးသာသှားမလား ၊ ဒါနဲ့ နပေါအုံး မငျးတဈနာရီ ဘယျလောကျနဲ့ အလုပျလုပျနတေုနျး “ကြှနျနျော တဈနာရီ 1500 ရတယျ” ဒါဆို မငျးတဈနမှေ့ာ ဘယျနှနာရီ အလုပျလုပျတုနျးကှာ “10 နာရီလောကျ အလုပျလုပျပါတယျ”
ဟုတျပီ အဲ့တာဆိုရငျ မငျးတဈရကျ 30000 ရခငျြရငျ နာရီ 20 အလုပျလုပျမှာလား? လူငယျက အဖိုးကွီးပွောလိုကျတာကို စဉျးစားသှားရငျး အဖိုးကွီးက ဆကျပွောတယျ။” မငျး နာရီ 20 အလုပျလုပျလို့ ရတဲ့ ဝငျငှေ အတိုငျးအတာကို တခြို့လူတှကေ 1 နာရီထဲနဲ့ ရနကွေတာကော မငျးဘာလို့လဲ မစဉျးစားမိဘူးလား”
“အလုပျလုပျနရေုံ၊ အလုပျ ကွိုးစားနရေုံနဲ့ မခမျြးသာ လာနိုငျဘူးကလေး ရှေးခယျြမှု မှနျကနျဖို့၊ အသိဉာဏျရှိဖို့၊ နညျးစနဈကဖြို့တှေ လိုတယျ”။ အဖိုးကွီးပွောပုံအတိုငျးဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ အလုပျကွိုးစားလုပျနရေုံနဲ့ မရပါဘူး
ရှေးခယျြမှုမှနျကနျလာအောငျ ဘယျလိုတှေ လုပျရမလဲ၊ ခမျြးသာလာအောငျ ဘယျလိုအသိဉာဏျတှေ ရှိဖို့လိုအပျမလဲ၊ နညျးစနဈကစြှာ ဘယျလိုတှေ အကောငျထညျဖျော ငှရှောကွမလဲ ဆိုတာတှေ လိုအပျလာပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ အလုပျကွီးပဲ ဖိလုပျ၊ ကွိုးစား ငှရှောနကွေမယျ့အစား ဘယျလိုတှေ လုပျသငျ့တယျ၊ ဘယျလိုတှကေ ပိုပီး အခှငျ့လမျးတှေ ရှိမယျလို့ ရှေးခယျြ ဆုံးဖွတျဖို့တှေ လိုအပျနတေယျဆိုတာ ငွငျးစရာတောငျ မလိုပါဘူး။
ဒါ့ကွောငျ့ သငျဘာတှေ ဆကျလုပျသငျ့တယျ၊ ဘာတှဆေကျလုပျရမယျ ဆိုတာကို အရငျဆုံးရှာဖှပေီး ရှေးခယျြမှု မှနျကနျကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုရငျး . . .
Credit: Lwin Pyin Cele News
တစ်ခါက အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ညစ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို တွေ့တော့ မေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်လေး မင်းဘာတွေ တွေးပြီး စိတ်ညစ်နေတာလဲကွ။ အဘိုးကြီးက ဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်း မေးလိုက်တယ်။
ကျွန်နော်ဗျာ အခုထိ မချမ်းသာနိုင်သေးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ပျက်နေတာ။ ဘိုးကြီးက မျက်လုံးပြူးသွားကာ “ဟေ မင်းက ချမ်းသာချင်လို့လား ” လူငယ်က ကသိကအောက်ဖြစ်သွားကာ“ဦးလေးကလဲဗျာ မချမ်းသာချင်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိလို့တုန်း လူတိုင်း ချမ်းသာချင်ကြတာပဲဗျ”
အေးပါ ဟုတ်ပါပီ။ ဒါနဲ့ မင်းချမ်းသာချင်တော့ အခုဘာတွေ လုပ်နေတုန်း။ ကျွန်နော် အခု Company တစ်ခုမှဝန်ထမ်းလုပ်နေတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပီ။
အလုပ်လဲ ကြိုးစားတာပဲဗျာ၊ ခုထိ မချမ်းသာသေးဘူး အဘိုးကြီးက တစ်ချက်ပြုံးသွားကာ “မင်းအခု ဘယ်သူ့အတွက် အလုပ်လုပ်နေတာလဲ ” Company မှာ လုပ်တာဆိုတော့ Company တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့ဗျ။
မင်းက မင်းအတွက် လုပ်တာမှ မဟုတ်တာ မင်း Company အတွက် လုပ်တာပဲဟာ မင်းချမ်းသာမလား Company ပဲ ချမ်းသာသွားမလား ၊ ဒါနဲ့ နေပါအုံး မင်းတစ်နာရီ ဘယ်လောက်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတုန်း “ကျွန်နော် တစ်နာရီ 1500 ရတယ်” ဒါဆို မင်းတစ်နေ့မှာ ဘယ်နှနာရီ အလုပ်လုပ်တုန်းကွာ “10 နာရီလောက် အလုပ်လုပ်ပါတယ်”
ဟုတ်ပီ အဲ့တာဆိုရင် မင်းတစ်ရက် 30000 ရချင်ရင် နာရီ 20 အလုပ်လုပ်မှာလား? လူငယ်က အဖိုးကြီးပြောလိုက်တာကို စဉ်းစားသွားရင်း အဖိုးကြီးက ဆက်ပြောတယ်။” မင်း နာရီ 20 အလုပ်လုပ်လို့ ရတဲ့ ဝင်ငွေ အတိုင်းအတာကို တချို့လူတွေက 1 နာရီထဲနဲ့ ရနေကြတာကော မင်းဘာလို့လဲ မစဉ်းစားမိဘူးလား”
“အလုပ်လုပ်နေရုံ၊ အလုပ် ကြိုးစားနေရုံနဲ့ မချမ်းသာ လာနိုင်ဘူးကလေး ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့၊ အသိဉာဏ်ရှိဖို့၊ နည်းစနစ်ကျဖို့တွေ လိုတယ်”။ အဖိုးကြီးပြောပုံအတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်နေရုံနဲ့ မရပါဘူး
ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်လာအောင် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ရမလဲ၊ ချမ်းသာလာအောင် ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေ ရှိဖို့လိုအပ်မလဲ၊ နည်းစနစ်ကျစွာ ဘယ်လိုတွေ အကောင်ထည်ဖော် ငွေရှာကြမလဲ ဆိုတာတွေ လိုအပ်လာပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အလုပ်ကြီးပဲ ဖိလုပ်၊ ကြိုးစား ငွေရှာနေကြမယ့်အစား ဘယ်လိုတွေ လုပ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုတွေက ပိုပီး အခွင့်လမ်းတွေ ရှိမယ်လို့ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ဖို့တွေ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာတောင် မလိုပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် သင်ဘာတွေ ဆက်လုပ်သင့်တယ်၊ ဘာတွေဆက်လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို အရင်ဆုံးရှာဖွေပီး ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း . . .